Diimaa Nagoo eenyudha?? - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDiimaa Nagoo eenyudha??
Diimaa Nagoo baruma tokko qabsaa’aa dhugaa ta’ee hin beeku. Bara ABOn bu’urreeffamu miseensa bu’uraa ture, yeroo sana haga korri sabaa waamamee hoggana filatutti dura taa’aa koree bu’ureessitootaa akka ta’u J/ Baaroon file. Isa booda qabsoo dhiisee gara biyya Senegal (barumsaaf) deeme. Bakka inni hin turretti 1976 korri sabaa jalqabaa taa’ee hoggana filate. Kanumanis J/Magarsaa Barii dura taa’aa ta’ee filatame. Yeroo inn barumsa fixatu waan hundi babbadee waan tureef hogganni hundi bosona seenaniiru. inni kaan hidhameera. Innis yoon biyya gale nan hidhama jedhee gara Sudaan deemee hoggana achi jirutti (J/ xahaa abdiifaatti) makame. Akkuma achi gaheen garuu finciluu jalqabe.
“Dura taa’aan dhaabichaa ana ture shiraan bakka ani hin jirretti na buustan” jechuun gumgummii eegale. Lakkii sun Kora sabaatu file jedhamus fudhachuu dide. Isa booda magaalaa Khartum keessaa utuu hin ba’iin hojii biyya alaan hojjedha malee jedhee achuma ture. utuma kanaan jiranii Jilli qabsaa’otaa bara 1989 hoggana dirree dhiyaa fi bahaa yeroo filu Leencoo lataa dhihatti galaasaa Dilboommoo bahatti filanii dirreen bahaa bu’uura qabsoo waan ta’eef dura taa’aan J/ Galaasaa akka ta’u murtaa’e. Filmaata sanarratti shirri narratti raawwateera anatu filatamuu qaba turee jedhee fincile. J/ Nadhii Gammadaa dura taa’aa koree filachiiftuu dirree dhihaa waan tureef Nadhii Gammadaatu shira natti dalage jedhee J/ Nadhii haga dhumaatti xamadee qabe.
Isa booda biyyatti galamee yeroo aangoon hiramu mootummaa ce’umsaa keessatti Ministerra beeksisaa ta’ee ramadame. Achi keessa taa’ee walitti dhufeenyi isaa ABO irra gara EPRDFtti cillaaqfata ture. Rakkoon dhalatee gaafa ABOn gadhiisee ba’u hin ba’u jedhee aangoodhuma isaarra turuuf EPRDF gaafate. Garuu Mallasaan ni dide. Yoo dandeesse ABO hambisi malee ati qofaatti hin teessu jedhe. Haala kanaan kan dirqamee bahe Diimaan, teessuma isaa Nairobi godhachuun shira biraa jalqabe. Itti gaafatamaa damee siyaasaa waan tureef dameesaa gara jaarmiyaatti jijjiiruun dhaaba mataa isaa dhaaba keessatti ijaarrachuuf carraaqe. Haaluma kanaanis DDPO (damee dantaa polotikaa Oromoo) ijaarsa jedhu diriirsee biyya keessatti maadheelee dhaabaa hunda of-jala galchuun ijaaruutti ka’e.
Haa ta’u malee eessaanuu hin geeenye. Warra EPRDFtti ergaa karaa J/ Zagayyee Asfaaw ergachuun ABO dhuunfachuu isaa hime. Isaanis waan mullatu tokkoyyuu akka hin jirre itti himanii yoo dhugaa ta’e caasaa qabu hunda akka isaanitti kennu gaafatani. Kanumaan miseensota dhaabaa jajjaboo harka diinaa buuse. Dhaaba keessatti kun dhagahamnaan rakkoon guddaan uumame. Hoggannis bakka lamatti baqaqe. Inni tokko kan J7 leencoon hogganamu yoo ta’u inni kaan kan Diimaa ta’e. yeroo kanatti J/ Galaasaan dhukkubsatee biyya German waan tureef bakka bu’iinsa kan qabu Diimaa ture. Ammas hin teenye biyya Kenya keessattis hogganootaa fi miseensota gameeyyii jedhaman hunda tika biyya sanaa fi Mallasaa waliin ta’uun hidhaatti naqani. warra hidhame keessaa J/ Daawud tokko ture. Haa ta’u malee gargaarsa diplomatotaatiin hiikamanii walakkaan gara biyya alaatti akka ergaman yoo ta’u walakkaan bosonatti deebi’ani. warra bosona filate keessa tokko ammas J/ daawud ture.
Dubbiin Diimaan ABOdhaa waliin qabu asumatti raawwate bara 1996. Isa booda biyya German galee maatii isaa waliin jiraachuutti ka’e. Bara 1998 kora sabaa adda irratti waamichi godhameefis na ajjeesuufi jedhee argamuu dide. Bara 1999 yeroo J/ daawud dura taa’aa ta’u hogganoota duraanii hundaaf waamicha godhee hojiitti deebise. Inni ammas hojii fudhachuu didee barumsa isaa itti fufe. waggaa dheeraa booda gaafa rakkoon dhaaba keessatti bara 2007tti dhalatu warra hokkora uume gorsuutti ka’e. Qaamaa Jijjiiramaa ofiin jedhe sanaafis ifatti gorsituu ta’ee hojii eegale. sunis ni fashale.
Gaafa kun fashalu shira kana keessaa harka qabaachaa kan ture Leencoo waliin walitti deebi’ani Forum tokko dhaabani (ODF dura akka manguddummaatti jalqabe) kunis booda gara dhaabaatti jijjiirame. Waan nama hundumaa raaje garuu Diimaa fi Leencoon walitti deebi’anii waliin hojjechuu isaanii ture. Diinota lamman hogganni dhaabaa sababa isaaniitiin waggoota dheeraa jeeqamaa ture yeroo walitti deebi’an qaphxiin isaan walitti fide tokkicha ture. Innis jibba J/ Dawud iraa qaban. Jibbi isaa maalirraa madde? Ifa ture. ABOn qabsoo hidhannoo dhiisee EPRDFtti harka haa kennu yaada jedhu mormuu isaa qofa ture. Dhumarratti Leencoo fi Diimaan wal qabatanii biyyatti erga galanii booda wanta ta’e waan hundi beekuuf asirrattin xumura. Garuu wayita ammaa Leencoo fi diimaan bakka tokko hin jirani.